Nlebanya mbadamba mbadamba ụmụaka 2022 - Ntuziaka zuru oke
Nyocha mbadamba ihe ụmụaka
Blackview Tab 6 ụmụaka
Onyinye maka ụmụaka na-eto eto
Onyinye maka nwa 1 afọ
mbadamba nkume maka ụmụ akwụkwọ
Mbadamba ụrọ ụmụaka
iPads maka ụmụaka
itinye ego maka ụmụaka
Nlebanya mbadamba ihe ụmụaka - mbadamba ụrọ kacha mma maka ụmụaka 2022
Ị na-achọ onye a pụrụ ịdabere na ya Nnwale mbadamba ihe ụmụaka n'usoro doro anya? Anyị nwere mbadamba ụmụaka kacha mma 2022 nwalere.
Mbadamba ụrọ sitere na Apple
Mbadamba ụrọ sitere na Amazon
Mbadamba ụrọ maka ụmụ akwụkwọ
Ụdị kacha mma 2022
Ndị ndezi ule mbadamba ụmụaka
Emelitere Eprel 29, 2022
Ị na-achọ onye a pụrụ ịdabere na ya Nnwale mbadamba ihe ụmụaka n'usoro doro anya? Anyị nwere mbadamba ụmụaka kacha mma 2022 nwalere. Ịzụta mbadamba nkume ụmụaka bụ nnukwu ego. Anyị nwere ụdị ugbu a na ọnụahịa-arụmọrụ na A nwalere ịdị mma ụmụaka. Ugbu a gụọ ma chekwaa onwe gị maka ego ejiri kacha mma atụmatụ maka gi na nwa gi. Pịa ebe a ugbu a ka ịgụọ nyocha anyị nke mbadamba nkume dị iche iche wee chọpụta nke ga-adabara nwa gị mma.
Nwale onye mmeri na nyocha
Mgbe zụtara ọhụrụ, mbadamba nkume ụmụaka kwesịrị inwe ọtụtụ atụmatụ dị ka o kwere mee mana ọ ga-abụ ndị nne na nna na-achịkwa
Ndepụta ndenye maka mbadamba ụmụaka
Nsonaazụ nke mbadamba mbadamba ụmụaka n'ụzọ zuru ezu
1. Blackview Tab 6 mbadamba ụmụaka
igbanwe: Atọ ruo afọ asatọ
Njikwa nne na nna: mpaghara iKids maka njikwa nne na nna, friza ngwa, nchedo okwuntughe, njikwa oge, njikwa ngwa, njikwa ojiji, njikwa weebụsaịtị
Akaụntụ ụmụaka ọtụtụ: Ee
akwụkwọ ikike: 2 afọ (Dịka onye nrụpụta si kwuo: Ọ bụrụ na enwere ntụpọ, ọ nwere ike ịlaghachi na onye na-emepụta ya ma nyefee mbadamba mbadamba)
ahụ ike: Teknụzụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ dị ala, Ọnọdụ gbara ọchịchịrị, ikpe anaghị egbu egbu na enweghị isi
Ike nchekwa: 32GB (256GB gbasaa)
igwefoto: azu, ihu
Mkpebi igwefoto: Igwefoto 2MP + 5MP
Akụkụ ngwaahịa X x 20.8 12.4 0.9 cm
batrị 1 batrị lithium-ion achọrọ (gụnyere).
Ngosipụta nha 8 inch, 1280*800 IPS ihuenyo mmetụ dị elu
Nhazi: 2,0GHz (12 nm quad-core Unisoc-T310)
Akụrụ ihe nhazi: 8
random ohere nchekwaNchekwa: 3 GB nke RAM
Ụdị njikọ: 5G WIFI, 4G LE, Bluetooth
sistemụ nrụọrụ Android 11 & Doke OS_P 2.0
Ndụ batrị: awa 9.9 watt
Ihe dị arọ ihe: 365g
Akara anyị 9.6
Maka onyinye kacha mma
Njikọ: USBC ọdụ ụgbọ mmiri, MicroSD oghere, 3,5mm ekweisi Jack
SIM: SIM abụọ (2*Nano SIM ma ọ bụ 1*Nano SIM + 1*microSD)
Ọpụrụiche: ọnọdụ ntụrụndụ ihu abụọ, dual 4G LTE: nwere ike iji kaadị ekwentị abụọ n'otu oge, imeghe ID ihu, akpa akpụkpọ anụ.
2. 🥈 Fire HD mbadamba ụmụaka 10
Sistemụ arụmọrụ: Ọkụ OS
Nha ngosi: 10,1 n'ime
mkpebi ihuenyo: 1080 pixels
32 GB nke ebe nchekwa
Agba: Okwu na-acha anụnụ anụnụ, aquamarine ma ọ bụ lavender
Njikwa nne na nna Ihe nzacha afọ, ebumnuche mmụta na oke oge
mgbanwe afọ: mgbe ịbanye ụbọchị ọmụmụ
Ụlọ ahịa Google Play enwere ike
ọnọdụ nchekwa ike
ọdụ ụgbọ mmiriUSB-C- (2.0)
Ndụ batrị: Ruo awa iri na abụọ
Akara anyị 9.65
Usoro Betriebss: gam akporo 10
Nha ngosi: 8 n'ime
mkpebi ihuenyo: 1920 x 1200 pixel
8 inch HD ngosi
Nchekwa: 32GB (nwere ike gbasaa ruo 128GB)
processorNchekwa: 2 GB nke RAM
Agba: Agba abụọ; acha anụnụ anụnụ na pink
Playstore: Ụlọ ahịa Google Play ga-ekwe omume
nche: AEEZO efu Ngwa njikwa nne na nna: Kpọtụrụ ụmụaka wee lelee mmemme ndị na-adịbeghị anya + ugboro na oge ojiji
Ndụ batrị: awa 9.25
akụkụ: 21 x 12.5 x 1 cm; 350 gram
igwefotoIgwefoto abụọ (2MP + 5MP).
akwụkwọ ikike: Otu afọ nloghachi na mgbanwe ọrụ.
Ab 100,99 EGO 84,99
4. Ọkụ 8 HD Tablet Kids Edition
Usoro Betriebss: Ọkụ OS
Ejiri afọ 2: A ga-edochi ngwaọrụ n'efu
0% ego: €45,00 x 3 nkeji nkeji
8 inch HD ngosi maka foto na vidiyo dị nkọ
Kidsmụaka Amazon +: ọba akwụkwọ mgbasa ozi na-enweghị mgbasa ozi
WiFi dakọtara: ịntanetị na-akparaghị ókè
32 GB ebe nchekwa na oghere microSD: ruo 1 TB gbasaa
Agba: Dị na agba atọ
Ịtọ oge ojiji maka ụmụaka ga-ekwe omume
Akara anyị 9.2
5. ỤBỤRỤ ỤMỤ ỤWA ỤWA
Mara: OBI ỤTỌ
Njikwa nne na nna: Sistemụ nchekwa okwuntughe, nhazi oge ihuenyo, ụdị nchekwa na njikwa ọdịnaya nchọgharị.
akwụkwọ ikike: Mba
ahụ ike: Teknụzụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ dị ala
Ike nchekwa: 32 GB (nwere ike ịgbasa ruo oke. 128 GB)
random ohere nchekwaNchekwa: 2 GB nke RAM
Akụkụ ngwaahịa X x 21 12.4 1 cm
agba: Blue, Pink
ngosipụta: 8 sentimita asatọ, 1920 x 1200 pikselụ
Nhazi: 1,6 GHz quad-core processor
Akụrụ ihe nhazi: 4
Ụdị njikọ: Wi-Fi
sistemụ nrụọrụ Android 9.0 – 10 (nkọwa dị iche iche)
accumulatorbatrị: 5000mAh lithium polymer batrị
Ndụ batrị: awa 4.9 watt
Ihe dị arọ :863g
Njikọ: USB Ụdị-C, oghere MicroSD, Jack ekweisi
Ụlọ ahịa Play: O kwere omume
ỌpụrụicheNgwa "Otu Ezinụlọ" na-enye ohere ka gị na ụmụaka kparịta ụka na ịkpọ oku vidiyo
Contra: 5V 2A chaja kwesịrị ịzụrụ iche
Akara anyị 9.1
Akụkụ ngwaahịa X x 24.4 20.2 3.4 cm
ngosipụta: 8 sentimita asatọ, 1280 x 800 pikselụ
Ụdị njikọ: Bluetooth, WiFi
sistemụ nrụọrụ Android 10
accumulatorbatrị: 6000mAh lithium polymer batrị
Ndụ batrị: 9.25 watt awa
Ihe dị arọ ihe: 540g
Akara anyị 9.0
Mara: Pebble Gear
Njikwa nne na nnaNdị nne na nna nwere ike nyochaa, tọọ oge egwuregwu, oge egwuregwu na ịnweta ngwa na akaụntụ nne na nna
ahụ ike: Ihe nzacha ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, egwuregwu sitere na ụlọ ahịa ngwa nke ya enweghị mgbasa ozi kpamkpam
Ike nchekwa: 16 GB (ihe dị ka 12 GB ka dị mgbe echichi mbụ gasịrị)
Akụkụ ngwaahịa 25x18x2cm; gram 780 (Oyi oyi kpọnwụrụ), 7.7 x 17.5 x 24.1 cm (Ụgbọ ala),
agba: Blue Light (Frozen), Mọstad Yellow (Ihe eji egwuri egwu), Red Signal (Cars), Blue Turquoise Blue (Mickey Mouse Bundle + ekweisi)
Ngosipụta nha 7 Zoll
Nhazi: Quad-core 1,3 GHz CPU
sistemụ nrụọrụ Android 8.1 Oreo / ma ọ bụ Android 8.1 Go (Mickey Mouse na ụdị ụgbọ ala)
Ihe dị arọ 780 grams (Frozen), 485 grams (Mickey òké),
Njikọ: Micro USB ọdụ ụgbọ mmiri, oghere MicroSD
Ụlọ ahịa Play: Ọ gaghị ekwe omume (Youtube na Youtube ụmụaka nwere ike iji naanị site na Safe-Brower na whitelisting)
ỌpụrụicheIhe karịrị egwuregwu na ngwa 500 nwere ohere ịnweta 'GameStore Junior App Store' ọnwa iri na abụọ. (Mgbe nke ahụ gasịrị, euro 12 maka otu afọ.)
Akara anyị 8.9
Site na 89,90 - 124,99 EUR
Akụkụ ngwaahịa 19 x 12 x 1 cm; 350 grams
Akụrụ ihe nhazi 4
Ogo RAM 2 GB
Nchekwa Art DDR3 SDRAM
Njikọta .dị Wi-Fi
mkpebi kamera weebụ 2MP
sistemụ nrụọrụ Android
batrị gụnyere ee
Ndụ batrị: 11.1 watt awa
Ihe dị arọ : 350 g
Akara anyị 8.6
site na 98,99 €
Sistemụ arụmọrụ: Android 10
Nha ngosi: 7 n'ime
7 inch HD ngosi
Agba: Abịa na agba abụọ: acha anụnụ anụnụ na pink
AEEZO efu Ngwa njikwa nne na nna: Kpọtụrụ ụmụaka wee lelee mmemme ndị na-adịbeghị anya + ugboro na oge ojiji
Akara anyị 8.4
site na 85,83 €
Usoro nke ule mbadamba ihe ụmụaka
Anyị jiri wee nwalee mbadamba ụrọ ụmụaka 23 dị iche iche n'ule n'ime oge nke ụbọchị ise. Site na ngụkọta nke mbadamba 5 enwere ike maka ụmụaka, anyị mechara jiri 20 mee ule ahụ ogologo oge wee tinye ha n'usoro ha. Nchekwa na ngwaọrụ ahụ, sistemụ arụmọrụ ejiri na njikwa maka ụmụaka bụ isi njirisi maka nyocha anyị.
Ekwesịrị ịhazi interface onye ọrụ dabere na mkpa ụmụaka. Ndị a na-agụnye mmetuta mmetụ aka, igodo nwere obere nkà moto na nhazi nke menu na ọdịnaya. Ndị a kwesịrị ịdị mfe ịnweta ụmụaka.
Nka nka. Ndị a gụnyere mkpebi ngosi, nchapụta na ntụgharị uche. Ọzọkwa olu ebe nchekwa, igwefoto mkpebi na ọsọ nke processor.
Ntọala nchekwa na njikwa maka ndị nlekọta iwu. Ohere nke ịmachi oge ojiji kwesịrị ịdị. Ọ dị ndị nne na nna mkpa ka ha nwee ike ịhazi ọdịnaya nwatakịrị ahụ nwere ike iri ma nwee ike ileba anya na mmemme nwata ahụ. Ngwa nne na nna bụ mgbakwunye.
kwụsie ike. Ụdị na oke nke mkpuchi ahụ kwesịrị iguzogide ọdịda nke dịkarịa ala mita 3. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dịghị ísì ọjọọ kwesịrị ịpụta na ihe ahụ.
Akwụ ụgwọ. Anyị ewepụla ndị nrụpụta nwere ọnụ ahịa ezoro ezo ma ọ bụ ọnyà ndenye aha na nyocha a.
Nsonaazụ zuru ezu: Amazon Fire 8HD mbadamba
The Fire 8 HD Tablet Kids Edition nwere ọmarịcha okpokolo agba plastik kwụsiri ike. Ụmụaka na-eto eto na ndị na-eto eto na-achọ ịnwale oke ha na ihe ize ndụ imebi mbadamba nkume bụ nke a na-arụ ọrụ nke ọma. Anyị kwenyere na mbadamba nkume a ga-abụ ezigbo enyi ruo ọtụtụ afọ, ọbụlagodi maka ụmụaka dị obere, dịka data onye ọrụ anyị nyochara na-egosi na etiti na ihuenyo na-akwado nke ọma mgbe ụmụaka na-emegbu ya.
Mbadamba ụrọ ahụ bụ nnukwu nhọrọ maka ụmụaka n'ihi na ọ dị fechaa, na-adịgide adịgide, yana ogologo ndụ batrị. Na mgbakwunye, ọ na-enye ihe karịrị egwuregwu - ị nwere ike iji ya na-ekiri ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri TV, gụọ akwụkwọ, kpọọ ngwa mmụta, ma ọ bụ ọbụna rụọ ọrụ ụlọ! Na njikwa ndị nne na nna, ị nwere ike belata ihe ha na-ahụ n'ịntanetị ka ekpughere ha n'ihe ọ bụla na-ekwesịghị ekwesị.
✔️ nkwa afọ abụọ na-enweghị nchekasị: a ga-edochi ngwaọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ gbajiri n'oge a
✔️ Njikwa nne na nna: ọkwa nchekwa nwere ike ịhazi nke ọma dabere na afọ na mmasị onye ọrụ
✔️ Enwere ike itinye ego na 0 pasent na nkeji atọ kwa ọnwa gburugburu euro 45
✔️ Ngosipụta inch asatọ nwere mkpebi HD zuru oke
✔️ Ọbá akwụkwọ mgbasa ozi nkeonwe na-enweghị mgbasa ozi na ndenye aha AmazonKids
❌ Enweghị ụlọ ahịa Google Play ga-ekwe omume n'ihi na ngwaọrụ ahụ na-eji Fire OS (sistemụ arụmọrụ nke Amazon) kama gam akporo. (Ntuziaka ka esi etinye Netflix agbanyeghị)
❌ Ngosipụta ahụ na-adị ka ọchịchịrị
LTE agaghị ekwe omume na njem
mbadamba mbadamba gbanye zụtara ọhụrụ Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ niile ngwaọrụ maka ndị okenye nwekwara n'ahịa. Ndị na-emepụta ihe etinyela onwe ha ihe mgbaru ọsọ nke ikwe ka mbadamba nkume tolite na ha ka ụmụaka nwee ike iji ha mee ihe n'onwe ha. N'otu oge ahụ, e nwekwara ọrụ ndị nne na nna kwe ka Machie oge ihuenyo ụmụ ha na iji ịntanetị na nyochaa. Ya mere na mbadamba nkume ka a elu afọ na nọgidesie ike n'ụlọ akwụkwọ nwere ike ọtụtụ Ụdị mbadamba ihe kwesịrị ekwesị maka ụmụ akwụkwọ. N'aka nke ọzọ, mbadamba nkume ụmụaka nke oge a na-achọ ime nke a dịka o kwere mee nwa-enyi inye ụmụaka ohere irite uru na-adabereghị na ha site na nwata yana otu a na obere ndị ọrụ tolite na. N'ihi na enwere ike ịmegharị ha na afọ ọ bụla, mbadamba nkume nwere ike ịga ogologo oge oge ndụ nweta. Nke ahụ nwekwara otu akụkụ gburugburu ebe obibi, nke ị kwesịrị ịtụle mgbe ịzụrụ. Ọtụtụ ndị nne na nna na-eche ma a Mbadamba ụrọ ụmụaka nwere ezi uche bụ na niile mmụta bara uru nwere ike ịbụ. Anyị na-abanye n'ime nkọwa ndị a n'okpuru ule.
Mbadamba ụrọ nke oge a nwere ọtụtụ atụmatụ na-enye ndị nne na nna aka ịchịkwa ụmụaka mgbe ha na-eji ha eme ihe ma na-enye ụmụaka ohere ijikọta egwuregwu na ntụrụndụ na mmụta. Atụmatụ mbadamba nkume ụmụaka 2021 kwesịrị ịgụnye bụ:
Ihe ngụ oge iji kpachie oge ụmụaka ji eme ihe (Ọzọ na isiokwu: Kedu oge ihuenyo dị mma maka ụmụaka? / Oge ihuenyo ụmụaka mkpọchi)
Njirimara dị ka igwefoto, igwefoto n'ihu na igwefoto azụ
Oghere Micro-SD ịgbasa nchekwa
Mkpuchi nchebe kwụsiri ike megide mmebi mmetụta (Ọzọ na isiokwu: ike ike na nwata)
Nhọrọ ịchaji USB-C
Mbupute ekweisi, ntinye igwe okwu na ugwu okpokoro
Nnwale ule mbadamba ụmụaka - nke mbadamba ihe kacha mma maka ụmụaka?
Dị ka mbadamba nkume maka ụmụaka, anyị na-akwado otu olu Ọkụ 8 HD Mbadamba ụrọ ụmụaka Edition. Isi ihe kpatara ya: Ọ gụnyere site na Amazon one akwụkwọ ikike afọ abụọ. Ya mere, ngwaọrụ ahụ na-agbaji, ị nwere ike iji ya ozugbo mgbanwe - na afọ abụọ. Ke adianade do, ọ atụmatụ ọrụ niile nke mbadamba ihe zuru oke maka ndị okenye ma nwee ike ya na ha tolite. Nke interface onye ọrụ na ọdịnaya na-agbanwe agbanwe, na-achịkwa na ahaziri na Haziri maka mkpa ụmụaka, na Tablet nwere ike dịkarịa ala ka afọ akwụkwọ ga-eji. Ebe nke abụọ na-aga mbadamba ụrọ ụmụaka Vankyo S8. O nwere na 60 GB kacha Oghere nchekwa, Na mgbakwunye na ọnọdụ nne na nna, ọ nwekwara ọnọdụ dị mfe na anya. Enwekwara igwefoto n'ihu na azụ nwere ezigbo onyonyo yana ọ dị maka ndị hụrụ Google Playstore n'anya. Nke a bụkwa mbadamba ụrọ zuru oke. Site na mgbanwe afọ, Vankyo S8 nwere ike iji ruo afọ akwụkwọ.
Mbadamba ụrọ bụ ụzọ dị mma isi mee ka ụmụaka gị nwee anụrị.
Nnwale mbadamba ụrọ ụmụaka bụ ebe kacha mma iji chọpụta mbadamba nkume dị mma maka gị na ezinụlọ gị. Anyị nwere nyocha nke mbadamba ụrọ niile ka ị nwee ike ịme mkpebi doro anya gbasara mbadamba ihe kacha mma maka gị. Ị ga-enwe ike ịhụ ihe atụmatụ mbadamba nkume ọ bụla nwere, ego ole ọ na-eri, na afọ ole ọ dabara tupu ịzụrụ.
Echiche onyinye zuru oke! Nye ụmụ gị ihe ha ga-ahụ n'anya nke ahụ ga-enyekwara ha aka ịmụtakwu gbasara teknụzụ n'ụwa dijitalụ a anyị bi na ya taa. Na mgbakwunye, ọtụtụ mbadamba juru na ngwa mmụta nke nwere ike inyere ụmụaka aka ịmụta nkà ọhụrụ ma na-eme ka ha nwee ntụrụndụ.
Ụmụaka na-aga mgbe niile ma na-achọ ihe ga-eme ka ha nwee obi ụtọ.
Mbadamba ụrọ bụ ụzọ dị mma ụmụaka ga-esi mụta gbasara teknụzụ na gburugburu ebe nchekwa na-adịghị adọpụ uche ha n'ọrụ ụlọ akwụkwọ ha dị ka smartphones nwere ike. Ma ọ bụrụ na nwa gị hụrụ n'anya na-egwu egwuregwu na ha mbadamba, mgbe ahụ nke ahụ bụ zuru okè n'ihi na e nwere tọn izi egwuregwu kwa! Ya mere, echela ọzọ - nweta nwa gị mbadamba nkume taa!
Twitter Instagram ọkara
© 2022 Nlebanya mbadamba ụrọ ụmụaka